Sunday July 27, 2014 - 00:43:02 in Wararka by Web Admin
waxaa laga yaabaa in aqristaha qormadaani uu is waydiiyo; "qabyaalad, siyaasad iyo diin gartaye dhaqanku waa midba?". Sidoo kale waxaa dhici karta inay u cuntami waydo qaabka ay 4taasi isugu milmi[qasmi] karaan, haddana, aa dhilee ila dhugo
Qabyaaladdu waa cudurka ugu liita dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed faylaha jaray in ka badan nus-qarnigii la soo dhaafay, haba ugu sii darnaato rubac qarnigii
[25sano] ugu danbeeyaye. Mabda'a qabiiliga ahi in kastoo uu iska jirey illaa iyo wax aan ku tilmaami karo 'isirka umadda soomaaliyeed, haddana, meelaha uu maanta gaarsiisan yahay ma gaarsiisnayn.
- In jufo kastaahi u hanqal taagto kuraasta ugu sarrraysa dalka, marka la gaaro xornimodii gacan ku rimiska ahayd oo xilligaas ballansanayd.
- In labaddii gobol ''koofur & woqooyi'' ee sheegay inay midoobeen soomaalida maqanna ay raadinayaan aysan awoodda hoggaaminta dalka u sinnaan.
dowladihii KMG ee dibaddaha lagu soo dhoodhoobay iyo tan hadda xamar saldhiggeedu yahayba waxay ku BASE-gareysnaayeen qabiil ''4.5''